हाम्राे पिपलबाेट » ‘अब जसरी पनि साइकल सिक्छु’ ‘अब जसरी पनि साइकल सिक्छु’ – हाम्राे पिपलबाेट
‘अब जसरी पनि साइकल सिक्छु’
नेपालगन्ज उप–महा नगपालिका–३ की स्वास्थ्य स्वयंसेविका लक्ष्मी कनोजियाले बुधबार नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाबाट पाएको साइकल घर पु¥याउन अटो रिक्सा बोलाउनुप¥यो । साइकल किन अटोमा राख्नुभएको? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा लक्ष्मीले भनिन्, ‘चलाउनै आउँदैन । सानोमा छोरी मान्छेले साइकल चलाउन खोज्दा हेर यो त साइकल पो चलाउन थाली भनेर खिसी गर्थे । अनि सिक्न मन लागेन ।
बुहारी भइसकेपछि त झन् साइकल चलाएको राम्रो मान्दैनन् हाम्रो समाजमा ।’
अब साइकल लगेर के गर्नुहुन्छ त? भन्ने अर्को प्रश्नमा लक्ष्मीले दृढ भएर उत्तर दिइन्, ‘अब त जसरी पनि सिक्छु ।’ खिसी गर्लान् नि ? ‘नगरपालिकाले नै साइकल चलाउ भनेर दिएपछि अब कसले रोक्ने । कसले खिसी गर्ने ?’ उनी भन्दै गइन्, ‘राति खाना खाइसकेपछि साइकल सिक्न निस्कने हो ।’ लक्ष्मीजस्तै अर्की स्वयंसेविका रचना बंशकारले पनि अहिलेसम्म साइकल चलाउन सिकेकी रहिनछिन् । उनीहरु दुवैजनाले एउटै अटो रिक्सामा साइकल बोकाएर घर पु¥याए । रचनाले लक्ष्मीकै जस्तो प्रतिबद्धता जनाइन्, ‘म पनि अब साइकल चलाउन सिक्छु ।’
साइकल पाएका केही स्वयंसेविकाहरुले सँगै आफन्त पनि लिएर आएका थिए । त्यसको कारण थियो चलाएर घरसम्म लगीदिउन् । उप–महानगरपालिकाले साइकल दिएपछि अब उनीहरुमा चलाउन सिक्ने जाँगर पलाएको उनीहरुसँगको कुराकानीबाट बुझ्न सकिन्थ्यो । उप–महानगरपालिकाले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई आवतजावतमा सहज होस् भन्ने उदेश्यले साइकल वितरण गरेपछि अहिलेसम्म साइकल नसिकेका स्वयंसेविकाहरु पनि चलाउन सिक्ने इच्छा व्यक्त गरिरहेका थिए ।उप–महानगरपालिकाले नगरका सबै स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुलाई साइकल वितरण गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत १५ लाख रुपैयाँको लागतमा एक सय ६८ स्वयंसेविकाहरुलाई साइकल वितरण गरिएको छ । स्वयंसेविकाहरुलाई उपमहानगर प्राङ्गणमा बोलाएर साइकल हस्तान्तरण गरिएको थियो । साइकल वितरण कार्यक्रम नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका मेयर डा. धवलशम्शेर राणाको उपस्थितिमा भएको थियो । कार्यक्रममा राणाले स्वास्थ्य स्वयंसेविका स्वास्थ्य दुत भएकोले उनीहरुलाई समुदायमा पुग्न सहज र सुलभ साधन भएको महसुस गरी साइकल वितरण गरिएको बताए ।नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकामा रहेका दुई सय १ जना स्वास्थ्य स्वयंसेविकामध्ये ३३ जनाले ६० वर्ष पुरा गरेर अवकाश लिइसकेकाले एक सय ६८ जनालाई साइकल वितरण गरिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राम बहादुर चन्दले जानकारी दिए । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको समुदायमा पहुँच सहज हुने र स्वास्थ्य सेवालाई समुदायस्तरमा पु¥याउन उनीहरुलाई थप हौसला मिल्ने अपेक्षासहित साइकल वितरण गरिएको चन्दले बताए । ‘अधिकांश स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुले पहिले देखि नै साइकलको माग गर्दै आउनुभएको थियो । हामीले आर्थिक स्रोतको जोहो गर्न सकेका थिएनौँ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत उप–महानगरपालिकामा आएको रकमबाट साइकल वितरण गरेका हौँ,’ चन्दले भने
२३ असार २०७८ मा प्रकाशित